Koofurta Sudan oo ogolatay in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo dalkooda – The Voice of Northeastern Kenya
Koofurta Sudan oo ogolatay in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo dalkooda
Hoggaamiyaasha urur goboleedka IGAD ayaa jimacadii isugu yimid shir Madaxeed deg-deg ah oo waddamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, iyo wakiilada dalalka iyo ururrada kale ee caalamiga ah ay kaga arrinsanayeen xasaradda ka aloosan Jamhuuriyadda Suudaanta Koonfureed
Madaxda gobolka ayaa isku raacay in Suudaanta Koofureed loo diro ciidamo ka socda gobolka kuwaas oo farogeliya xaaladda ka sii daraysa ee dalkaas.
Xoghayaha guud ee IGAD Eng. Maxbuub Macalim ayaa saxaafadda u sheegay in Xukuumadda Suudaanta Koofureed oggolaatey in ciidamo faragelin ku sameeya loo diro, Maxbuub ma caddeyn mandate-ka rasmiga ah ee ciidankaasi qabanayo, waxaase u sheegay in ay faro-gelinayaan xaaladda dalkaas oo qarka u saaran mar kale in ay ka dhacdo dhimasho aad u badan iyo barakac kadib markii u bur-burey heshiskii Kiir iyo Machar.
Suudaanta Koofureed waxaa hadda ku sugan in ka badan 12 000 oo askari oo ka socda Qaramada Midoobey kuwaas oo ku hawlgalaya UNMISS, waxaana lagu cambaareeyay in aysan xaaladda waxba ka qaban, dadka rayidka ahna hortooda lagu dhibaateeyo.
Xoghayaha guud ee IGAD Maxbuub ayaa sheegay in ciidamada loo dirayo ay hirgelin doonaan heshiiskii August 2015, waxaana la horgeyn doonaa Qaraar lagu ansixinaayo Golaha Amaanka.
Bishii Luuliyo waxaa caasimadda Suudaanta Koonfureed ee Jubba ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo kala taageersan Salva Kiir Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar, dagaalkaas ayaa burburiyey heshiiskii Adis Ababa, waxaana Salva Kiir mar labaad xilkii ka qaadey Machar oo dib ugu noqdey meelaha ay ku badan yihiin tageerayaashiisu.
← Qareenada Mr Gulen oo sheegay in ay u baqayaan nolasha wadaadkaasi
Shirkada korontada oo ku guuleysatay in qeybo katirsan dalka korontada u soo celiso →
1 thought on “Koofurta Sudan oo ogolatay in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo dalkooda”
Abdishukri ali says:
Ani ahaan waxaan aminsanaha in ciidamo nabad ilaalin wax ladhoho aaysan jirin mxaa yeelay waa kuwa dalka burburinaya waana kuwii somalia dumiyay..
So i think there nothing call nabad ilaalin